We.com.mm - ဂျိုင်းချွေးနံ့ဘာလို့နံတာလဲ? ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ?
ရေမွှေးနဲ့ အနံ့ပျောက်ဆေးတွေ သုံးနေပေမယ့် ဂျိုင်းချွေးနံ့က မသက်သာတဲ့အပြင် ပိုဆိုးလာပြီလား။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲ၊ ချွေးနံ့သက်သာအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိပါသလား။
လူတွေရဲ့အသားအရေမှာ ဘက်တီးရီးယား ၁၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ချွေးနံ့ဆိုးတွေထွက်တာက အဲ့ဒီ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ချွေးထဲမှာပါတဲ့ ပရိုတိန်းတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာကြောင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ ဘာလို့ဂျိုင်းချွေးနံ့က အနံဆုံးဖြစ်နေတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂျိုင်းမှာ ချွေးကျိတ်တွေပိုများသလို ပရိုတိန်းဓာတ်လည်းပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘက်တီးရီးယားလည်း ပိုစားသုံးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ချွေးနံ့ဆိုးစေတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်တွေ ပိုထွက်စေတာပါ။ ချိုင်းချွေးနံ့နံရခြင်းက ဇီဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ် လုပ်နေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုကို ပြောင်းလဲပါ
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အတွက် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေက မတူညီပါဘူး။ ဂျိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဖို့တချို့က Roll on သုံးရင် အဆင်ပြေပေမယ့် တချို့ကျတော့ roll on သုံးမှ ပိုဆိုးသွားတာတွေ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံ သုံးကြည့်ပေမယ့် ဂျိုင်းချွေးနံ့က ဆိုးရွားနေဆဲပဲဆိုရင် အခုပြောမယ့်ဟာလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ။
ရေချိုးနည်းတာက အရေပြားမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပိုပွားစေပါတယ်။ ချွေးနံ့အရမ်းထွက်တတ်သူတွေအတွက် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်တည်း ရေချိုးတာကို မလုံလောက်ပါဘူး။ မနက်တစ်ခါ ညအိပ်ခါနီးတစ်ခါ antibacterial ဆပ်ပြာနဲ့ ရေချိုးပါ။
၂. အစားအသောက်မဆင်ခြင်တာနဲ့အစာချေဖျက်စနစ်မှာ ပြဿနာရှိတာ
အစားအသောက်မဆင်ခြင်တာနဲ့အစာချေဖျက်စနစ်မှာ ပြဿနာရှိတာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနံ့ထုတ်ပေးတဲ့ တစ်ရှူးရဲ့၇ရာခိုင်နှုန်းကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ရေမွှေးအကောင်းစားသုံးရဲ့သားနဲ့ အနံ့ဆိုးနေသေးရင် အစာချေဖျက်စနစ်မှာ ပြဿနာရှိနေလို့ပါ။ အနံ့ပြင်းတဲ့အစားအစာနဲ့ငန်တဲ့အစားအစာတွေဟာ ချွေးပေါက်တွေကနေ အနံ့ဆိုးတွေထွက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ အစာချေရည် ချို့တဲ့နေလို့ပါ။ အစာကို ကောင်းစွာ မချေဖျက်နိုင်တော့ အသားအရေကလည်း အနံ့ဆိုးတွေထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝမ်းမချုပ်ပါစေနဲ့၊ အနံ့ပြင်းတာတွေ မစားပါနဲ့။
၃. Hand Gel သုံးပါ
အခုနောက်ပိုင်းမှာ လက်မှာကပ်နေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ Hand Gel or Hand Sanitizer ကိုသုံးလာကြပါတယ်။ ဂျိုင်းမှာ Hand Gel နည်းနည်းလောက် ပွတ်ထားလိုက်ရင် ချွေးနံ့နံတာကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
အရက်မှာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျိုင်းချွေးနံ့ကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဂျိုင်းအောက်မှာ အရက်နည်းနည်းလောက် သုတ်လိမ်းလိုက်ပါ။ ဗော့ကာဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ကပ်စေးကပ်စေးမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် အချိုဓာတ်ပါတဲ့ဟာတွေမှန်သမျှ ရှောင်ပါ။
Chemical ပါဝင်တာတွေက အလုပ်မဖြစ်ရင် သဘာဝပစ္စည်းတွေ သုံးလို့ရပါတယ်။ ကျောက်ချဉ်၊ အုန်းဆီ၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ စသဖြင့် အမျိုးမျိးသုံးကြပါတယ်။ အုန်းဆီက ပူတဲ့ရာသီဆိုရင်တော့ အရည်ပျော်ပြီး အင်္ကျီကိုပေကျံစေပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကတော့ အနံ့ဖျောက်တဲ့နေရာမှာ တော်တော်ထိရောက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက မတည့်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ အသားအရေ နီမြန်းတာ၊ ကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့တာတွေတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝပစ္စည်းတွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ခံအင်္ကျီတစ်ထပ်ခံတာတွေ ဘာတွေလုပ်ပြီး သုံးပါ။ သဘာဝပစ္စည်းတွေကတော့ chemical တွေထက် ပိုထိရောက်တာ သေချာပါတယ်။
Ref; Thompson Tee
Baby Shampoo နဲ့ အုန်းဆီကိုအသုံးပြုပြီး မိတ်ကပ်ဖျက်ကြမယ်…။
ဆံပင်အရောင်ဆိုးပြီးတဲ့အခါ မဖြစ်မနေသတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၈) ချက်
Lotion လိမ်းဖို့ပျင်းတယ် အချိန်မရှိဘူးလို့အော်နေတဲ့ ချစ်မတို့အဆင်ပြေစေဖို့
ကောင်မလေးတွေကို အသည်းတယားယားဖြစ်စေမယ့် Moschino ဒီဇိုင်း MakeUp Collection…။